[တရားဝင်] ဆင်းမ်ကဒ်သော့ဖွင့်ဝန်ဆောင်မှု -3ခြေလှမ်းများအတွက်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ SIM ကဒ် Unlock
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - SIM ကိုသော့ဖွင့်ဆောင်မှု
3 ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Unlock!
ဖုန်းများထောက်ခံ 1000+, 100+ ကွန်ယက်ကိုပံ့ပိုးပေးထောက်ခံ
သင်၏ဖုန်းကို Select လုပ်ပါ
သငျသညျထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပုံမှန်အတိုင်းဖုန်းရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်နှင့်ကမ္ဘာအတွက်မဆို network ပေါ်မှာကကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါသော့ဖွင့ညွှန်ကြားချက်တစ်ဦးနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းဖုန်းအလုပ်မလုပ်ပေမယ့်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်သည့်အမည်ပျက်စာရင်းကနေဖယ်ရှားပစ်မထားဘူးဆိုတာကိုသတိရလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့သလဲ ဤနေရာတွင် Check
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသင့်ရဲ့ဘေးထွက်စွန့်ခွာဖို့ရှိပါတယ်ဘူး။ အဆိုပါသော့ဖွင့ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကို အသုံးပြု. Continue ။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Select လုပ်ပါနှင့်တောင်းဆိုမှုကို form မှာဖြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့သော့ဖွင့ကုဒ်က e-mail ဖြင့်ရယူရန်။
သင်၏ဖုန်းသို့ type သော့ဖွင့ကုဒ်
သင့်ရဲ့အမိန့် status ကို Check
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို select ဖို့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့လိုဂိုကိုကလစ်နှိပ်ပါ, တောင်းဆိုမှုကို form မှာဖြည့်ခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချက်ချင်းသော့ပွင့်နှင့်မည်သည့်ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ပါလိမ့်မည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီ e-mail.?Once အားဖြင့်သင့်ခြေလှမ်း-by-step သော့ဖွင့ညွှန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိ ပံ့ပိုးပေးသူ။
Sony Ericsson က
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဖုန်းသော့ဖွင့်
+ SIM ကိုသော့ဖွင့်ဝန်ဆောင်မှု - ငါဘယ်လို Dr.Fone နဲ့ငါ့ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်သလဲ?
Dr.Fone နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန် - SIM ကိုသော့ဖွင့်ဆောင်မှု, သင့်ဖုန်းသော့ခတ်သည်ဖြစ်စေလျက်, မော်ဒယ်, တိုင်းပြည်နှင့်ကွန်ယက်ပံ့ပိုးပေးရွေးချယ်ပါ။ ကျနော်တို့ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင့်တောင်းဆိုမှုကိုလုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည်နှင့်တစ်ဦးကိုအာမခံပေးပို့အချိန်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လို e-mail ဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
+ ဘယ်လောက်ငါ့ဖုန်းကို unlock လုပ်ဖို့ကုန်ကျပါသလဲ?
တစ်ခုသော့ဖွင့ကုဒ်၏စျေးနှုန်းအများအပြားအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်လုပ်, မော်ဒယ်, တိုင်းပြည်နှင့်ကွန်ယက်ပံ့ပိုးပေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါအတိအကျစျေးနှုန်းသင့်ဖုန်းသော့ခတ်နေသည်ပြသပါလိမ့်မည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခုချင်းစီကိုသော့ဖွင့များအတွက်အထူးလျှော့စျေးကိုလက်ခံရရှိသည်အတိုင်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တက်မှ 50% လျှော့စျေးလည်းပါဝင်သည်ပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်။ သငျသညျဆင်းမ်ကဒ်သော့ဖွင့်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြပြီးတာနဲ့သင်ကဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပုံမှန်အတိုင်းဖုန်းရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်နှင့်ကမ္ဘာအတွက်မဆို network ပေါ်မှာကကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါအာမခံပေးပို့အချိန်ဖုန်းမှသော့ခတ်ထားပါသည်တိုင်းပြည်နှင့်ကွန်ယက်ပံ့ပိုးပေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျတောင်းဆိုမှု form မှာဖြည့်ပါတယ်တဲ့အခါဒီအချိန်ဘောင်အဖြစ်အလားတူသော့ဖွင့်ဘို့အပျမ်းမျှပေးပို့အချိန်, screen ပေါ်မှာပြသပါလိမ့်မည်။